Puntland Archives - Page 21 of 21 - Sawirrotv
Heshiiskii Puntland iyo Beesha Caalamka oo Natiijo La’aan ku soo Dhamaaday (VIDEO)
February 11, 2016 – Waxaa maanta si wadajir ah shir jaraa’id u qabtay Madaxweynaha maamulka Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Arrimaha dalka Soomaaliya Danjire, Michael Keating. Madaxweynaha Puntland oo hadalka ku horeeyay ayaa sheegay in ay sagootinayaan Wafdigan balaaran ee beesha caalamka ka socda, kuwaas Puntland …
Faroole iyo Siyaasiyiin Kale oo Garoowe Kula Kulmay Ergada Beesha Caalamka (VIDEO)
February 10, 2016 – Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland C/raxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud (Faroole) iyo Siyaasiyiin Kale ayaa waxaa ay Magaalada Garoowe kulan kula qaateen Wakiilka Qaramada Midoobe ee u qaabilsan arrimaha Somaliya, Micheal Keating iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka. Gaba gabadii kulankan oo uu Faroole la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay wafdiga …
Madaxweynaha Puntland oo Baaq u Diray Beesha Caalamka (SAWIRRO)
February 05, 2016 – Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland mudane, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta kulan la qaatay Hay’adaha gargaarka ee ka howlgala gudaha maamulka Puntlad, iyagoo ay hay’adahani isugu jiraan kuwo caalami ah iyo kuwo maxalli ah, wuxuna kala hadlay habka lagu wajihi karo abaaraha lasoo sheegayo. Madaxweyne Gaas ayaa hay’adahaasi waxaa uu kala …
Madaxweynha Puntland oo Maanta Booqasho Ku Tegay Dekkadda Boosaaso (SAWIRRO)
January 30, 2016 – Madaxweynaha maamulka Puntland Mudane, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta kormeer shaqo ku gaaray Dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Dekeddan ayaa ah isha kaliya ee ugu dhaqaalaha iyo Shaqaalaha badan ee Maamulka Puntland, waxana dhowaan lagu bilaabi doonaa balaarin iyo casriyayn cusub. Madaxweyne Gaas ayaa sidoo kale soo kormeeray xafiisyada waax-yaha …
DAAWO: Faroole oo Madaxweyne Xasan Sheekh ku Sheegay Munaafuq (VIDEO)
January 29, 2016 – Madaxweynihii hore ee Maamulka Puntland, C/raxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole ayaa ka hadlay natiijadii kasoo baxday shirkii madasha wadatashiga kaas oo looga hadlayay aayaha dalka Soomaaliya iyo qaabka loo marayo doorashooyinka dalka ka dhici doono bartamaha sanadka ee 2016-ka. Faroole ayaa marka hore sheegay inuu kasoo horjeedo heshiiskii lagu go’aamiyay magaalada …
Madaxwynaha Puntland oo Kulamo Gooni Gooni ah la Qaatay Beesha Caalamka (VIDEO)
January 24, 2016 – Madaxweynaha Puntland mudane, C/weli Maxamed Cali Gaas oo soo gaaray Magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu Garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho uu kulamo gooni gooni ah uu kula qaatay xubno uu ka mid yahiin Wakiilka Xoghayaha Guud Qaramada Midoobe Ee Somaliya Amb. Michael Keating iyo xubno kale oo ka socda Beesha …
Ciidamada Badda ee Puntland oo Bilaabay Qabashada Doomaha Sharci darada Ku Kaluumasta (VIDEO)
January 13, 2016 – Ciidamada maamulka Puntland ayaa bilaabay Roondayn ay ku baadi goobayaan maraakibta shisheeye oo sida sharci darada ah uga kaluumaysyta xeebaha dalka Soomaaliya. Ciidamadan ayaa soo qabta maraakiib badan oo laga leeyahay dalal badan oo ku yaala qaaradda Asia, sida dalalka, Kuuriyada-Waqooi, Vietnam, Iran iyo dalal kale oo badan. Xeebaha Soomaaliya ayaa waxaa …
DAAWO: Garoonka Diyaaradaha ee Bosaso oo Maanta Xariga laga Jaray (VIDEO)
January 08, 2016 – Madaxweynaha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xariga ka jaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso oo hadda noqday mid ka mid ah garoomada ugu waa weyn ee dalka Soomaaliya, kadib dhismo xoogan oo bilihii lasoo dhaafay laga weday garoonka Boosaaso. Mashruuca dhismaha garoonka diyaaradaha Boosaaso ayaa waxaa …
Xarunta Cusub ee Madaxtooyada Qardho oo Maanta Xarigii Laga Jaray (SAWIRRO)
January 05, 2016 – Madaxweynaha muumulka Puntland Mudane, Cabdi Weli Maxamed Cali Gaas iyo Wafdi balaaran ee uu hogaaminayay ayaa waxa ay maanta gaareen Magaalada Qardho ee xarunta Gobolka Karkaar, waxaana magaaladaasi si diiran ugu soo dhaweeyay madaxda maamulka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi. Madaxweynaha Puntland ayaa markii uu gaaray Magaalada Qardho waxa …